विजयकुमारको दोषी चस्मा र विर्सीएका गगन थापा-Nagarikaawaj.com
विजयकुमारको दोषी चस्मा र विर्सीएका गगन थापा
सोमवार, फाल्गुन १७, २०७२
“युवापुस्ताको यस्तो जल्दोवल्दो पात्र कार्यक्रममा आउनुहुन्छ भनेर म पनि टाई लगाएर आएको” भनेर हास्दै दिशानिर्देशको कार्यक्रममा विजयकुमारले गगन थापालाई अन्तवार्ता लिन सुरु गर्छन् । करिव तीन वर्ष अघिको यो कार्यक्रममा संविधानसभाको चुनावको मिति तोकिएको विषय देखी लिएर चुनाव वहिस्कार गरेको तत्कालिन मोहन वैद्यको माओवादीलाई मुल धारमा ल्याउने कुरासम्मको चर्चा हुन्छ ।
त्यसको ठीक एक वर्ष पछि अर्थात आजभन्दा दुई वर्ष अघि पुनः उनले दिशानिर्देश कार्यक्रममा डाकेर अन्तवार्ता लिन्छन् ।
“तपाई नेपालीमा वढ्दो आकांक्षाको प्रतिक हो ?” विजयकुमारले यस प्रश्नवाट अन्तवार्ता सुरु गर्छन् ।
“जुन आकांक्षा तपाईमाथी छ त्यसको पूर्ती कहिले हुन्छ ?” “गगन थापा हुनुको सवैभन्दा ठूलो चुनौती यो छ कि अपेक्षाको भारी वोकेर तपाईपछाडी विशाल जनमत छ तर डेलिभर गर्ने स्थानमा न तपाई हुनुहुन्छ न त्यसको सम्भावना अहिले देखिन्छ तपाईको पार्टीगत संरचना हेर्दा खेरि ।”
“तपाईका आवाजहरु पार्टीभित्र त्यतिकै घनत्वका साथ सुनिन्छन् जति आम सभातिर सुनिन्छन् ?”
उक्त दिशानिर्देश कार्यक्रममा विजयकुमारले वोलेका, सोधेका भनाइ एवं प्रश्नहरु हुन् यी ।
जवाफमा गगन थापा भन्छन्,
“सुनिदैनन्, त्यसैले यो पार्टीभित्र भएका वा पार्टीले वनाएका कतिपय नियमहरु, संस्कारहरु भत्काउनुपर्छ, तोड्नुपर्छ । त्यसैका निम्ति लागिरहेको छु ।”
फेरि विजयकुमार विचार राख्छन्,
“यो त “वैश्य समाज” हो उत्पादन हेर्छ मानिसले, गगन थापाले सदा राम्रो भाषण गर्छ, राम्रो अन्तवार्ता दिन्छ भन्ने आधारमा मात्र हमेशा सुविधा जनताले दिदैन नी । एउटा विन्दुमा तपाईले “पर्फम” गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । गरेर देखाउन उपयुक्त स्थानमा हुनुपरयो । ड्राइभर राम्रो छ भन्ने तर स्टेरिङ्ग नदिने काम हुनुहुदैन ।”
जवाफमा गगन भन्छन्,
“भइराखेको ड्राइभिग सिटमा वस्न खोजेको छु, अहिलेको ड्राइभरलाई अलिअलि पन्छाएर,अलिअलि धकेलेर त्यहा वस्ने ठाउँ वनाउन खोज्दै छु । निवेदन दिएर, याचना गरेर मात्र पार्टीभित्र शक्तिको हस्तान्तरण हुँदैन ।
विजयकुमारले त्यतिवेला भनेको स्टेरिङ्ग समात्ने ठाउ अव आउन लागेको छ । त्यो, नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेसनबाट हुनसक्छ ।
तर गगन थापाको विगत देखी अहिलेसम्मका अभियान, विचार एवं उनी समक्ष आशा गरिएको ठूलो आकांक्षासँग यति धेरै परिचित विजयकुमारले आइतवार एक अनलाइनमा लेखेको “ कांग्रेसलाई पार लगाउने जोडी” लेखमा कहिकतै उनलाई उल्लेख गर्न आवश्यक ठानेनन् । महामन्त्री पदका लागी उम्मेदवारी दिएको कुराले सामाजिक मिडियातिर यसरी फैलिएको छ कि यसवारे उनी अनभिज्ञ अवश्य छैनन् । आफ्ना तर्कहरुवाट नामै तोकेर डा. शसांक कोइराला र शेरवहादुर देउवालाई कांग्रेसलाई पार लगाउन सक्ने उपयुक्त भनेर भनिसकेपछि उनी गगनवारे केही नवोली कसरी मौन रहन सक्छन् ? महाधिवेसनको पुर्वसन्ध्यामा लेखिएको लेखमा महामन्त्रीको पदका लागी लड्छु भन्ने कांग्रेसी नेताको वारेमा उनी पूर्णरुपमा मौन रहन नमिल्नुपर्ने हो । गगन थापालाई महामन्त्रीको रुपमा डा. सशांकसँग तुलना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यसको आ आफ्नै तर्कहरु होलान्, तर उनले वोकेको युवामैत्री कतिपय मुद्दा र उनको त्यस मुद्दाप्रतिको क्रियाशिलताको कुनै न कुनै रुपमा उल्लेख गरेको भए लेखले मूल विषय वस्तुसँग वढी न्याय गर्नेथियो कि ?
धेरै जसो कांग्रेसजनहरु के स्वीकार्छन् भने पार्टी वाहिर आम जनता गगनलाई पार्टीको प्रभावसाली तहमा रहेर नेतृत्व गरेको हेर्न चाहन्छन् तर पार्टीले उनलाई केन्द्रिय सदस्य पनि कृपा गरेर बनाइदिए जस्तो व्यवहार दर्शाउछ । पार्टीको पदाधिकारिको झुण्ड नै सर्वेसर्वा सावित भएपछि केन्द्रिय सदस्यहरुको भुमिका पनि गौण हुनेगरेको विगतमा देखिदै आएको छ ।
कांग्रेसभित्र भत्काउनुपर्ने संस्कार नै यही हो जसको लागि गगनले वोलेका छन्, लेखेका छन्, वहस गरेका छन् अवसर मिल्दा अथवा भनौ “लडिरहेका छन्” पार्टीभित्रै पनि र वाहिर पनि । त्यसैको लागि गगनलाई पछ्याउनेहरुको संख्या ठूलो छ नयाँ पुस्तामा। र कर्म गरेर देखाउने स्थानमा बस्ने मौका आएको छ जसवाट उनको वास्तविक परिक्षण हुनेछ, सधै वाककलामा मात्रै राम्रो हो कि कर्म गरेर देखाउन पनि सक्षम छ गगन भनेर ।
यस कुरालाई दृष्टिगत गर्दै पत्रकार अमित ढकालले गगनको “सप्राइज उम्मेदवारी” भनेर आफ्नो “कांग्रेसभित्रमा महाचुनावको सकस” लेख मार्फत् एक ढंगले विश्लेषण गरेका छन् । उनले गगनको उम्मेदवारी दिनु नै उनको जित भएको भनेर गगनको उम्मेदवारीलाई आफ्नो लेखमा विशेष स्थान दिए । तर पत्रकार विजयकुमारले गगनको उम्मेदवारीलाई महत्वको विषय त कुरै छोडौ सामान्य रुपमा चासोको विषय नै बनाउन किन आवश्यक ठानेनन् आफ्नो लेखमा ? धेरैलाई लागेको हुनुपर्छ यो जिज्ञासा ।
“कुनै विन्दुमा तपाईले पर्फम गरेर देखाउनुपर्छ र त्यसका लागी पार्टीको संसचनाले गर्दा डेलिभरि गर्ने स्थानमा तपाई हुनुहुन्न” भनेर कुनैवेला भन्ने विजयकुमारले महाधिवेसनलाई त्यो संरचना फेर्ने अवसर किन नदेखेका हुन् । वुझिएन । दिशानिर्देश कार्यक्रममै “पर्फम् गरेर देखाउन ड्राइभिङ्ग सिटमा वस्न खोजिरहेछु” भनेर जवाफ दिने गगनलाई ड्राइभिग सिटमा वस्ने यो मौका आउँदा किन विजयकुमारजीले आफ्नो धारणा राख्न कञ्जुस गरे ?
सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा भएको ति लेखहरुले पाठकहरुलाई विशेष प्रभाव पनि पार्छन् । त्यस्तो फरक प्रभाव पार्ने लेखहरु आउँदा कसैको जीवनभर गरेको मेहनत र क्रियासिलतालाई (जसलाई हजारौ युवाजमातले पछ्याइरहेका छन्) नजरअन्दाज गर्दा लेखले न्याय गरेन कि भन्ने भान हुँदो रहेछ । यस लेख लेख्नुको मुल कारण पनि त्यही हो ।
यो केवल एउटा “कांग्रेसी ठिटोका” कुरा नभएर राजनितिक संस्कार भत्काउने एउटा युवाअभियान सँग जोडिएको विषय हो। सधैं एउटै आश्वासन मात्रै बाड्ने नेताज्यूहरुवाट आजित भएको निराशाजनक वातावरणमा केही नयाँ गर्न खोज्ने, केही फरक आशाको सञ्चार ल्याउन खोज्ने अन्य राजनितिक दलका युवापुस्ताको मुद्दा पनि यसै सँग जोडिएको छ ।
अधिवेशनलाई लिएर यत्रतत्र कांग्रेसजन मात्र होइन विभिन्न मिडीयाहरुमा चर्चा भइरहेको गगनको नाम लेखभरि कहि पनि उल्लेख गरिएन । कांग्रेसलाई पार लगाउन सधै पूरानो ढंगले चलेर हुँदैन भनेर स्वयम् अहिलेका सभापतिका प्रत्यासी उम्मेदवारहरु पनि स्वीकार गर्छन् । तर कांग्रेसलाई पार लगाउन एउटा आवश्यक कुरा चाहि नेतृत्व तहमा युवाको सहभागीता मात्र होइन प्रभाव पनि हो । यही मुद्धालाई उठाउदै आएका युवा नेता गगन थापालाई महाधिवेसनको पुर्वसन्ध्यामा आएको लेखमा कहि न कहि उल्लेख नगरेर कतै गल्ति त भएन ?
त्यो यसकारण कि कांग्रेसमा युवा जमातको प्रभाव हुनेगरि नेतृत्व तहमा युवाको आवश्यकतालाई म एक सामान्य मानिस भन्दा स्वयम् विजयकुमारले राम्ररी वुझेका छन् । कांग्रेसका युवापुस्ताका नेतादेखी लिएर प्रौढ पुस्ताका नेतालाई अन्तवार्ता लिएका विजयकुमार शेरवहादुरको पुस्ता भन्दा गगनको पुस्तामा कति फरक छ ? भन्ने कुरा मैले भन्दा सयौ गुणा वढी जानकार छन् ।
यस लेख सामाजिक सञ्जालतिर सेयर भएर विजयकुमारजीले पढ्न भ्याउनुभएछ भने, के मात्र अनुरोध गरेको हुँ भने गगनको नाउँ भन्दा पनि उनले वोकेको युवापुस्ताको मुद्धालाई भएपनि यहाले कहिन कहि सम्वोधन गरेको भए हुन्थ्यो । महामन्त्री मा उम्मेदवारी दिने भनेका गगनले महामन्त्री जित्लान् नजित्लान् आफ्नो ठाउँमा छ । कांग्रेसभित्र विभिन्न नेतागण मध्ये उनी मात्र उपयुक्त विकल्प हुन् भन्ने पनि हुँदै होइन, उनी भन्दा राजनितिमा खारिएका धेरै नेताहरु छन् । तर उनको यो उम्मेदवारीले कांग्रेसमा मात्र होइन हामीकहा भएका राजनितिक दलहरुमा अभ्यास हुँदै आइरहेको सदा “वुढो नेतृत्वको संस्कार” भत्काउन केहि त महत्व अवश्य नै राख्दछ ।
नेपाली कांग्रेस सवैभन्दा वुढो पार्टी मात्र होइन , तुलनात्मक रुपमा अरु राजनितिक दलहरुभन्दा सधैं “वुढो नेतृत्व” भएको पार्टी पनि हो । कांग्रेस समर्थकहरुमा कांग्रेसप्रतिको निराशाजनक दृस्टिकोणको हुनुमा यसलाई पनि एउटा कारण मान्न सकिन्छ भने अर्को कारण गुटमा विभाजित हुने संस्कार हो । त्यसैले गुटमा विभाजित हुने संस्कारवाट अक्षुण रहँदै आएका अनि वुढो नेतृत्वको विस्थापन संगै पार्टीलाई परिस्कृत गर्ने मुद्दा उठाउदै आएका गगनको उम्मेदवारीले विशेष अर्थ राख्नुपर्छ महाधिवेसनलाई लिएर गरिएको जो कोहीको टिप्पणी तिर ।
समाज, राजनिति, जीवन र दर्शनका अनेक आयामहरुवाट प्रश्न गर्न माहिर विजयकुमारजीले नितान्त धेरै कुरा वुझेका छन् । यो लेख लेख्दै गरेको एक नवयूवक उनले लेखेको त्यो लेखको कुनै कुरासँग खण्डन गर्न सामथ्र्य नै राख्दैन । त्यसैले यसलाई उनीप्रतिको हार्दिक सम्मानकासाथ एउटा जिज्ञासाको रुपमा ग्रहण गरिदिनुहुन सवैसँग अनुरोध गर्छु ।